Axmed M Shire Raage: Shidaalka Soomaaliya iyo filashada natiijo laga gaaro (dhegayso) – Radio Daljir
Axmed M Shire Raage: Shidaalka Soomaaliya iyo filashada natiijo laga gaaro (dhegayso)
Febraayo 11, 2019 2:10 b 1
Todobadii bishaan Feebraayo ee 2019, magaalada London waxaa ka dhacay shir quseeyey arrimaha shidaal ee Soomaaliya, siiba soo bandhigga xogo laga aruurshay shidaalka Soomaaliya, gaar ahaan xagga Badda.
Xogtaasi oo ay baaristeeda samaysay shirkad gaar ah oo horay Dawladda Federaalka ee Soomaaliya heshiis sahan ula gashay ayaa shirkaaddu sahankeeda kadib London ku shaacisay xog-helkeeda.
Axmed Maxamed Shire Raage waa xeeldheere xagga arrrimaha shidaalka ah, wuxuuna kamid ahaa dadkii ka qaybgalay shirkii London ee bandhigga shidaal badeedka Soomaaliya. Wareysi gaar ah oo uu Raage siiyey Radio Daljir ayuu uga hadlay natiijada laga fili karo dhaqdhaqaaq sahal shidaal ee dawladda Soomaaliya ay bilawday, waxaase uu marka hore ku horraynayaa Shirkii London iyo iskugu imaatinkiisa arrinkii ubucda u ahaa.
Mansha Allah waa waraysi qiimo leh, waana loo baahanyahay in rag badan oo sida Axmed oo kale ah oo aqoon leh la helo